“ABAWD” Waqtiga xadidan ee la siiyo Gargaarka Cuntada (SNAP) dadka waaweyn ee kelida ah oo aan cidina la noolayn | LawHelp Minnesota
“ABAWD” Waqtiga xadidan ee la siiyo Gargaarka Cuntada (SNAP) dadka waaweyn ee kelida ah oo aan cidina la noolayn
COVID-19: ABAWD (dadka waaweyn ee shaqaysan kara oo aan cidna la noolayn) ma laha waqti xadidan ilaa laga gaaro Juun 2021.
Sharci ( Qaanuun) Cusub! Haddii aad hadda tahay hooy laawe, waxaad heli kartaa Cuntada Gargaarka ah oo aan lahayn waqti xadidan. U sheeg xafiiska ku yaal degmadaada haddii aad tahay hooy laaawe. U shee xafiiska degmada haddii aad hoy la’aan tahay.
Yaa ah “ABAWD”?
ABAWD Waxay u taagan tahay dadka waaweyn (Hanaqaadka ah) oo shaqaysan kara oo aan cid kale aysan la noolayn. Waa qofka weyn oo da’diisu u dhaxayso 18 ilaa 49 sanno, oo aan curyaan ahayn, uur lahayn, aan jirranayn, oo aan ku noolayn hooy ay ku noolyihiin caruur. Dadka ka yar 18 sanno ama ka weyn 50 sanno iyo wax ka badan ma aha ABAWDs.
Haddaad tahay ABAWD, waxaad heli kartaa Gargaarka Cuntada (SNAP) 12 bilood oo keliya muddo u dhexeysa 36 bilood gudohhod, haddii aadan ahayn qof shaqeeya, ama dugsi aada, iskaa wax u qabso ku shaqeeya, ama ku suggan xaalad gaar ah. Haddaad tahay ABAWD, iskaa wax u qabso waad kaga qayb geli kartaa banaamijyada tababarada, oo ay ku jirto GED, ESL ama fasalada waxbarashada dadka waaweyn (ABE).
Waa maxay sharciyada shaqo ee la xiriira ABAWD oo aad ku heli karto Gargaar Cunto (SNAP) oo ka badan 12 bilood?
Shaqaynaysay, ama aad samaynaysay shaqo iskaa wax u qabso ah muddo 20 saac asbuucii/ 80 saac bishii AMA
Aad qabanaysay shaqo la xiriirta Gargaarka Cunada (SNAP) iyo tababar ama aad ku jirtay barnaamijka howlgelinta qasabka ah muddo 27 saacadood bishii.
Maxaa la rajayn (filan) karaa?
Gargaarka Cuntada (SNAP) ee ku siman 12- bilood kuma khuseeyo haddii :
Da’daadu ka yartahay 18 sanno, ama ka weyntahay 50 sanno iyo ka badan.
Aadan shaqayn Karin 20 saacadood ama ka badan todobaadkii sababo la xiriira awood darro (tabar darro), dhibaato xagga maskaxda ah oo laga yaabo in aadan ka soo bogsan Karin ugu yaraan 30 maalmood gudahood. Aadan hoy hoy.
Haddii aad xanaanaynayso ilmo ka yar 18 (Khasab ma aha in aad waalid u tahay ilmaha)
Haddii aad qaadatid Gargaarka Guud (GA), ama dakhliga badbaada ee dheeriga ah (SSI) ama dakhliga badbaada bulshada curyaanka ah (SSDI) ama dakhliga Gargaarka Dheeriga ah ee Minnesota (MSA)
Haddii aad qaadatid dakhliga shaqa la’aanta ( shaqa beelka)
Hadii aad uur leedahay
Haddii aad gurigaaga ku xanaanayso qof jirran ama curyaan ah
Haddii aad wado waxbarasho aad ka qaadanayso dugsi la aqoonsanyahay ama barnaamij tababar ah ugu yaraan nus waqtigaaga ka mid ah.
Haddii aad ku jirto barnaamij baxnaanin ah ee la xiriira maandooriye ama khamro.
Haddii aad arji u qoratay Kabitaanka Dakhliga ee dheeriga ah (SSI), arjigaagana aan weli laga soo jawaabin.
Haddii lagu siiyo adeeg baxnaaninta (Dhaqan celis) (DVR)
Haddii lagu siiyo adeegga curyaamada aan waxba laga qaban karin (DD)
Dib u helida Gargaarkaagi Cunnada
Maadaama sharciyadii isbedeleen, waxaa suurta gal ah in aad dhaqso dib ugu hesho faa’iidada (waxtark) Gargaarka Cunnada (SNAP). Kala hadal xafiiska degmadaada sidii aad dib ugu heli lahayd Gargaarki Cuntada.
Haddii sharciyada shaqadu adiga ku khuseeyaan . . .
Waxaad dooran kartaa 12ka bilood ee ka mid ah 36 bilood (3 sanno) ee aad qaadan lahayd Gargaarka Cuntada (SNAP). Bil kasta oo aad qaadato Gargaar ka yar intii aad bil buuxda qaadan lahayd, laguma xisaabinaayo bilaahaaga wax ku tirsan. Arrin tanni waxay dhici kartaa marka aad Gargaarka codsato bisha kowdeeda ka dib ama aadan buuxin shuruudihii ku xirnaa maalmo ka mid ah bishaas.
Haddii qof ka mid ah inta isku guri ku nool uusan helin Gargaarka Cuntada sabab la xiriirta waqtiga la xadiday, inta kale ee gurigaas ku nool way heli karaan Gargaarka Cuntada (SNAP).
Maxaa dhici kara haddii aanan ku raacsaneyn go’aanka degmada?
Haddii aad weydid Gargaarka Cuntada (SNAP) sabab la xiriirta sharciga shaqo, ama laguu sheego in aad dhamaysatay mudadii bilaha aheyd ee laguu ogolaa, laakiin aadan ku raacsanayn go’aankaas, waxaad markiiba codsataa racfaan (dib u eegid). Hadii aad codsato racfaan muddo 10 maalmood gudohood ah, weli waxaad heli kartaa Gargaarka Cunto (SNAP) inta racfaanka lagu jiro.
Codsiga racfaanka (dib u eegidda), waxaad warqad u dhiibtaa qofka haya dacwadaada oo aad ku sheegayso sababta diidmada iyo taariikha diidmada, nuqul (koobi) kala har. Ama, fill out a form and submit your appeal xiriirsan. Riix: https://mn.gov/dhs/.
Guji halka “See u sameeyaa” Sanduuqa dusha saree e bogga
Hoos “Raadi” Riix “edocs and forms”
Garaac 0033 barta raadinta
Waxaa kaloo jira tilmaan bixin, haddaad rabto in aad akhrido. Si taxadar leh u akhri foomka, buuxi si dhamaystiran waxa lagu weydiiyay, dabadeedna riix halka ay ku qoran tahay “ Gudbi” dhanka midig ee hoose. Waxaa haboon in aad koobi ka daabacato.
Ka fiiri bogga xaqiiqooyinka Welfare Appeals faahfaahin intaas kabadan. La hadal gargaari sharci ee degmadaada haddii aad caawino u baahan tahay.